October 2017 – www.EUnepal.com
October 18, 2017 Kejin Rai 0
ईयुनेपाल प्रतिनिधि काठमाडौं ,अक्टोबर १७। काठमाडौंमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा निवर्तमान उपाध्यक्ष भवन भट्ट बिजयी भएका छन् । सोमबार सम्पन्न निर्वाचनबाट जापान निबासी भट्ट निर्वाचित भएका हुन् । उनले अध्यक्षकी प्रत्यासी जमुना घले गुरुङलाई पराजित गरे । सो निर्बाचनबाट उपाध्यक्षमा कुमार पन्त -जर्मनी र कुल आचार्य *-बेलायत निर्वाचित भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा >>>
गैर आबासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवका सशक्त उम्मेदवार जानकी गुरुङ
October 11, 2017 Kejin Rai 0
ईयुनेपाल प्रतिनिधि क्यासेल्लो काजाब्लान्का बेल्जियम , अक्टोबर १० । चितवन नेपालमा जन्मिएर बेल्जियमलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएकी जानकी गुरुङ यूरोपमा मात्र नभई सिंगो संसारको एक सशक्त नारी हस्ताक्षरको रूपमा परिचित भई सकेकी छिन । एनआरएनए ग्लोबलको एक सशक्त अभियन्ताको रूपमा स्थापित यिनै नेपाली साहित्य आकाशका नारी हस्ताक्षर गुरुङले आगामी कार्यकालको निम्ति केन्द्रीय सचिब पदको लागि उम्मेद्ववारी दिएकी छिन । >>>
*डिल्ली राम अम्माई एक जना अभियन्ताका अनुसार “गत फ्रान्कफर्ट जर्मनी क्षेत्रीय सम्मेलनमा भिजन २०२० को एक पक्षबाट खुब बिरोध भो तर भित्र उनीहरुले नेपालबाट बोलाएका उन्सत्तरी जना नेपाली के प्रयोजनका लागि बोलाइयो ? तिनीहरुको खर्च कसले बेहोर्छ ? अनि उनीहरुको सम्मेलनमा भूमिका के थियो ? त्यो बिषयमा हाल बोलेन, प्रश्न सोधेन, लिस्ट मागिएन किन >>>
* रामचन्द्र भण्डारी पेरिस, फ्रान्स | बिकसित देशमा कुनै अपार्टमेन्ट बिक्रि गर्नु भन्दा अगाडी एउटा टेक्निसियन ( Diagnostiqueur ) बाट त्यो अपार्टमेन्टका विभिन्न प्राबिधिक पक्षको जाँच गरि त्यसको रिपोर्ट तयार गर्नु पर्ने हुन्छ | यो रिपोर्टलाइ Rapport diagnostic भनिन्छ | अपार्टमेन्ट किन्ने ब्याक्तिले आफ्नो किन्ने निर्णय गर्नु भन्दा अगाडी यो रिपोर्ट >>>
मेरो बालसखा कमल ; बिजयी भब !
*डिल्ली राम अम्माई मेरो सम्बन्ध कमलसंग जोडिन पुग्नु अगाडी र जोडिने बेलाको परिवेशको गन्थन हो यो । पुराना कुराको छायांकन अझै पनि झल्याकझुलुक आइ रहन्छ दिमागमा । मेरो जीवनको पहिलो चरणका धेरै कुराहरु त शायद धमिलो क्षितिजभित्र विलुप्त भैसकेका छन् अहिले । म वाग्लुङ्गको पानीकटेरीबाट छर्लङ्ग देखिने गाँउ –वनहुमा हुर्केँ बढें । कमल म भन्दा >>>
October 1, 2017 Kejin Rai 0
*अर्जुन कुमार श्रेष्ठ भनिन्छ सफलताको लक्ष्य पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ । अहिले गैर आवासीय नेपाली संघको आठौं महासम्मेलन हुँदै गर्दा हाम्रा अग्रजहरुले सारेका पहिलो पाइलालाई विर्सनु हुँदैन । हिजोको बेला रसियामा बुनेको मायाप्रिती बेलायतमा मनाएको मधुमासबाट सन् २००३ को अक्टोबरमा जन्माएको हो ‘एनआरएन’ । हामी जोडियौं ती भावनासँग जुन भावनालाई अग्रजहरुले आत्मसाथ गर्दै यहाँसम्म ल्याइदिए >>>